Irraantotaa fi Jalaantota
Irraantotaa fi jalaantota ibsuufi dhangi'uu si dandeessisa.
Qaaqni Irraantotaa fi Jalaantotaa irraantotaafi jalaantota ibsuuf caancala qaba. Yoo filannoon Qabentaa bitaa/mirgaa walfakkaatu qaaqa Akkaataa Fuulaa keessatti milkataa'e irraantotaa fi jalaantota fuula bitaa fi mirgaaf caancalli garaagaraa jiraachuu ni danda'a.
Irraantoo yookiin jalaantoo akkaataa fuulaaf ibsa yookiin dhangi'a.
Title is: Irraantotaa fi Jalaantota